Dal hadda aad ugu gurmanaya Ukraine oo la sheegay inuu wato qorshe hoose oo uu ku damcayo qayb dalkaa ka tirsan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Dal hadda aad ugu gurmanaya Ukraine oo la sheegay inuu wato qorshe...
(Hadalsame) 24 Maajo 2022 – Madaxwaynaha Belarusia ee Alexander Lukashenko ayaa walaac ka muujiyey isku dayga la sheegay in wadamada reer Galbeedku ay ku doonayaan in ay ku googooyaan dalka Ukraine xilli uu Ruushku dagaal wado dalkaasi.
Intii lagu guda jirey kulan uu la yeeshay dhiggiisa Ruushka, Vladimir Putin, oo ka dhacay magaalada Sochi Isniintii, Lukashenko ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo martigaliyihiisuba ay ka walaacsan yihiin hab-dhaqanka qaar ka mid ah siyaasiyiinta Polish-ka iyo NATO.
Waxa uu si gaar ah u soo xigtey talaabadii ay qaadeen kooxda uu Maraykanku hogaaminayo ee ah in ay ciidamadooda isugu geeyaan xudduudaha galbeed ee Ruushka iyo Belarus.
“Siyaasiyiintu waxay qaadayaan tillaabooyin ay ku burburinayaan Ukraine. Waxaan ka walaacsanahay in iyaga, Polish-ka iyo xubnaha NATO, ay diyaar u yihiin inay soo baxaan, si ay ‘caawiyaan’ habkan, si ay u qaadaan, sidii ka hor 1939, Galbeedka Ukraine, “ayuu yiri madaxweynaha Belarusian.
“Siyaasiyiintu waxay qaadayaan tillaabooyin ay ku googoonayaan Ukraine. Waxaan ka walaaqsannahay in iyaga, Polish-ka iyo xubnaha NATO, ay diyaar u yihiin inay soo baxaan, si ay uga ‘caawiyaan’ muuqaalkan, si ay u qaataan filimka, sidii ay ahayd ka hor. 1939-kii,” ayuu yiri Madaxwaynaha Belarusia.
MW Lukashenko ayaa sheegay in Galbeedku wataan “istaraatijiyad halis ah” mase uu soo bandhigin caddayn uu ku xoojinayo sheegashadan.
“Waxaan dhegaha u taagaynaa xaaladda,” ayuu yiri Lukashenko, isaga oo ku nuuxnuuxsaday inuu aaminsan yahay in mar uun Kiev laga yaabo inay u baahato kaalmada Moscow iyo Minsk si loo badbaadiyo sharafta dhuleed ee Ukraine.
Axadii, Madaxwaynaha Ukraine ee Volodymyr Zelensky wuxuu ku dhawaaqay in muwaadiniinta Poland la siin doono sharci gaar ah oo dalkiisa ah, isagoo sheegay in “maskax ahaan, dadka Ukraine iyo Poland ay ahaayeen kuwo aan la kala saari karin muddo dheer.”
Warkan ayaa daba socdey hadal kale oo uu jeediyey Madaxwaynaha Poland Andrzej Duda, kaasoo rajo ka muujiyey in mustaqbalka aysan gebi ahaanba jiri doonin xuduud u dhaxaysa Poland iyo Ukraine.
Previous articleDal wayn oo ka tirsan Midowga Yurub oo si xishood la’aan ah u xaalufinaya xeebaha Somalia
Next articleRuushka oo korontadii ka goostay dalkii 2-aad ee NATO ka tirsan & 3 dal oo uu u weecanayo